စျေးကွက်ရှာဖွေရေးကို Pilgrim ဆိုသည်မှာ Coopetition ကိုဆိုလိုသည် Martech Zone
စျေးကွက်ရှာဖွေရေးကို Pilgrim ဆိုသည်မှာ Coopetition ဖြစ်သည်
တနင်္လာနေ့, နိုဝင်ဘာလ 5, 2007 အင်္ဂါနေ့, အောက်တိုဘာလ 4, 2011 Douglas Karr
အန်ဒီ၏ blog, စျေးကွက်ရှာဖွေရေး Pilgrim, ငါအတော်လေးအချိန်ကြာမြင့်စွာအနေဖြင့်စာရင်းသွင်းပြီးပြီကြောင်းမဖြစ်မနေဖတ်ပါ ငါပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ်သတိရပါ အန်ဒီငါ့ blog ကိုကိုးကား - ငါမယုံနိုင်လောက်အောင်ချော့မော့ခဲ့သည် အန်ဒီသည်ကျွန်ုပ်၏ဘလော့ဂ်နှင့်စီးပွားရေးကိုနှစ်အနည်းငယ်အတွင်းလိုချင်သောနေရာကောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
ဘလော့ဂ်လုပ်ခြင်းရဲ့အံ့သြစရာကောင်းတာကပုဂ္ဂိုလ်ရေးထိတွေ့မှုဟာထူးခြားတဲ့ရှုထောင့်ကိုအမြဲတမ်းခွင့်ပြုတာပါပဲ။ တစ်ခုနှင့်တစ်ခုမတူသည့်ထူးခြားသည့်ရှုထောင့်တစ်ခုစီသည်တန်ဖိုးရှိသောဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုချရန်သင်လိုအပ်သောသတင်းအချက်အလက်မျှတမှုကိုပေးသည်။ ငါဒါကို crayons box တစ်ခုလိုစဉ်းစားမိတယ်။ အကယ်စင်စစ်သင်သည်တိကျမှန်ကန်သောရုပ်ပုံတစ်ခုဖန်တီးလိုလျှင်အရောင်အနည်းငယ်လိုအပ်သည်။ Marketing Pilgrim ကိုကျွန်တော်ဖတ်ခဲ့တယ်။ အန်ဒီရဲ့ရှုထောင့်ကငါ့နဲ့မတူ၊ ငါကအများကြီးသင်ယူနိုင်တယ်။
၎င်းသည်အချို့သောလူများအတွက်ထူးဆန်းပုံရသည်။ ငါတို့ပြိုင်ဘက်မဖြစ်သင့်ဘူးလား။ စာဖတ်သူတွေကိုတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ခိုးယူဖို့ကြိုးစားသင့်တယ်မဟုတ်လား။ လုံးဝမဟုတ်ဘူး! လူတွေကတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ဆတ်ဆတ်ဆတ်ဆတ်ဆတ်ဆတ်ဆတ်ဆတ်ဆတ်ဆတ်ဆတ်ဆတ်ဆတ်ဆတ်ဆတ်ဆတ်ဆတ်ဆတ်ဆတ်ဆူးပစ်ရှိရာအဓိကမီဒီယာများနှင့်မတူဘဲဘလော့ဂ်များရှိသင့်သည် သင့်ရဲ့ ငါတို့စိတ်မဟုတ်, နှလုံးမှာအကျိုးစီးပွား။ ပြိုင်ဆိုင်မှုကိုနှိမ်နင်းလိုလျှင်ပင်ကျွန်ုပ်တို့၏စာဖတ်သူများအားသူတို့ကြီးထွားရန်လိုအပ်သည့်သတင်းအချက်အလက်များကိုပေးသည်ကိုကျွန်ုပ်တို့အသိအမှတ်ပြုသည်။ ၎င်းသည်တန်ဖိုးရှိပြီးပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိစေသည်။ ထပ်ဆင့်ယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ခြင်းနှင့်စာဖတ်သူများကို ဦး စားပေးသည်။
အဓိကအချက် - အကယ်၍ သင်သည်ကျွန်ုပ်၏ဘလော့ဂ်ကိုမှတ်ပုံတင်လျှင်၊ သင်သည်အန်ဒီ၏ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုလည်းစာရင်းသွင်းသင့်သည်။
မှတ်ချက် - Coopetition ဟာငွေကြေးမက်လုံးမပါဘဲလာတာမဟုတ်ပါဘူး။ ငါမျှော်လင့်တယ် သောအန်ဒီသော $ 500 အနိုင်ရ အဲဒီမှာထွက်ချပြီး! 🙂
Tags: analyticsအကြောင်းအရာစာရေးဆရာများဝယ်ယူအကြောင်းအရာအကြောင်းအရာဝယ်ယူtools တွေ
5:2007 pm တွင်နိုဝင်ဘာ 3, 24
ငါဘလော့အပါအ ၀ င် ၀ က်ဘ်ဆိုက်အသစ်များကိုတီထွင်ရန်ကြိုးစားနေသောကြောင့်ဤဘလော့ဂ်ပို့စ်သည်ကျွန်ုပ်ကိုစိတ်စွဲမှတ်စေခဲ့သည်။ ငါပြိုင်ဆိုင်မှုကြောင့်စတင်ရန်တွန့်ဆုတ်သော်လည်းငါမူကားစတင်ရန်ကျွန်ုပ်ကိုအားပေးသောသင်၏တင်္ဘူများအပါအ ၀ င်စာမူများစွာကိုကျွန်ုပ်ဖတ်ခဲ့သည်။ ယှဉ်ပြိုင်နိုင်တဲ့ကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေအတွက်နေရာအလုံအလောက်ရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်၊ စာဖတ်သူတွေအတွက်အကောင်းဆုံးလုပ်နိုင်တာကိုပဲအာရုံစိုက်ဖို့လိုတယ်။ ဤနည်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်၏ဘလော့ဂ်သည်အများအားဖြင့်အောင်မြင်လိမ့်မည်၊ အကြောင်းမှာ၎င်းသည်အသုံးဝင်ပြီးတန်ဖိုးရှိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
5:2007 pm တွင်နိုဝင်ဘာ 8, 27
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် Doug! လှည့်ပတ်သွားကြဖို့မေတ္တာအများကြီးရှိပါတယ်ငါသဘောတူ!